Rita, Writing for My Sake!: ဂျူး နှင့် ၀င်းငြိမ်း အင်တာဗျူး (၃)
Posted by Rita at 5/09/2009 11:40:00 PM
ဝေဖန်ရေးသမားတွေရဲ့ ကြားမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပြည့်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ စကားတစ်ချို့ကို ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ မေ့လျော့ သွားတာ နေပါလိမ့်မယ် .... တရားနည်းလမ်းတော့ ကျပါတယ် ... ကိုယ့်ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဝေဖန်ရေး သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကိုယ်ဘာကောင်လဲ .. ကိုယ်ပေးချင်တာက ဘာလဲဆိုတာတော့ သူမိမိရရပြောချင်တာနေမှာပေါ့ .... ဒါပေမယ့် သူနဲနဲ စကားပြောလောသွားတာ သေချာပါတယ် ... စကားတစ်ခွန်းကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်နိုင်ဖို့ ဆိုတာထက် .. စိတ်ထဲမှာ ရှိတာတွေကို ဖွင့်ထုတ်နိုင်ဖို့ သူဦးစားပေးဖြစ်ခဲ့တယ်နဲ့ တူပါတယ် ... လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတစ်ကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့ အချိန်ရှိပေမယ့် ကိုယ်ပြောထွက်လိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိန်သိပ်နှောင်းတတ်တယ်ဆိုတာကို ဒီပို့စ်မှာ မြင်သာစေပါတယ် ....
Thanks for your posts. Even though I have read this interview longtime ago, I still enjoy reading it again. I like Ju very much ,for I am always so delighted by her style of writing.....not always by the substance of her books. At times I do not agree with her. Since I have read her very first , controversial story " A Hmat Taya" published in the magazine I keep reading all her novels including the short stories and the articles available to me. At home I haveacollection of my favorite novels by Ju. 20+ years later I still enjoy them though I am getting old. Very fascinating!
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ရိုးသားတယ်။ သူများအပေါ် နိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အခက်အခဲတွေ့ရင် ကူညီ ဖြေရှင်း ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပရိယာယ် မကြွယ်ဝဘူး။ ဟန်မဆောင်တတ်ကြဘူး။ ဒါ မြန်မာတွေရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ character တွေပါ။ အဲဒီ character တွေကနေ သွေဖည်ပြီး ကျွန်မ ၀တ္ထု မရေးခဲ့မိသေးပါဘူး။
I can not accepted above paragraph.
Good character and Bad character are depend on the person.
Person who live in Upper/Middle/Lower Burma......
Japan/Korea/China/Thailand/Singapore up to Europe so on....
As per my experience, most people are good.